फेसबुकपछि ह्वाट्सएपमा पनि ह्याकिङको खतरा – onlinedarpan:
Posted on October 11, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 228 Views
फेसबुकका झण्डै ५ करोड प्रयोगकर्ताको अकाउन्टमा ह्याकरहरुले निसाना लगाएको घटना सेलाउन नपाउँदै फेसबुक मातहतकै ह्वाट्सएपमाथि पनि ह्याकिङको खतरा बढेको छ ।
टेक्नोलोजी साइट जेड डी नेटले ह्वाट्सएपमाथि ह्याकिङ्गको जोखिम बढिरहेको सम्बन्धमा एक नयाँ खुलासा गरेको छ ।
उसको दाबी अनुसार ह्वाट्सएपमा एक बग देखा परेको छ । उक्त बगले ह्याकरहरुलाई प्रयोगकर्ताको अकाउन्टभित्र प्रवेश दिइराखेको छ ।
प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपमा भिडियो कल रिसिभ गरेसँगै उनीहरुको अकाउन्टमा बगले आक्रमण गर्ने गर्दछ । त्यसैले प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपमा भिडियो कल रिसिभ गर्दा ह्याकिंगको खतरा हुने देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
रिपोर्ट अनुसार आइओएस र एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा प्रयोग गरिने ह्वाट्सएपमा पहिलोपटक गत अगष्टमा यो बग देखा परेको थियो । फेसबुकले यहीँ महिना यो बगलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । तर यसबारेमा फेसबुकले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । त्यसैले बग नियन्त्रणमा लिनुअघि कति ह्वाट्र्सप प्रयोगकर्ता ह्याकरको सिकार बने भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।
शोधकर्ता ट्राभिस आर्मेन्डीका अनुसार मात्र एक कलबाट ह्वाट्सएप ह्याक हुने कुरा निकै गम्भीर हो । अझ यस्तो संवेदनशील विषयमा ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्तालाई कुनै जानकारी नै नगराउनु झनै गम्भीर रहेको शोधकर्ताहरुको टिप्पणी छ ।
Share26TweetGoogle+Pin026sharesकाठमाडौं- दैनिक जीवनमा हामी कैयौं उपकरण प्रयोग गर्छौंं । तीमध्ये कतिपय उपकरण चलाउँदा हामीलाई त्यो कसले कहिले बनायो होला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । त्यसैले केही प्रमुख उपकरण, तिनका आविष्कारक र आविष्कार भएको मितिबारे जानिराखौं– के ? कसले ? कहाँ ? कहिले ? घडी, क्रिस्चियन हयुगेन्स हल्यान्ड–१६५६ स्टोभ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share0TweetGoogle+Pin00sharesवैज्ञानिकले किलोग्राम ‘केजी’को परिभाषा परिवर्तन गरिदिएका छन्। पचास भन्दा बढी देशले परिभाषा परिमार्जन गरेर नयाँ परिभाषा निर्माणगर्न सर्वसम्मत मन्जुरी दिएका हुन्। नयाँ किलोग्राम सन् २०१९ सम्म आउने विश्वास गरिएको छ।वर्तमानमा केजीलाई प्लेटिनमबाट बनेको एक सिलको वजनबाट परिभाषित गरिएको छ। जसलाई ‘ली गै्रन्ड’ भनिएको छ। यस्तो एक सिल पश्चिमी पेरिसमा ‘इन्टरनेसनल ब्यूरो अफ वेट्स एण्ड मेजर्स’ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…